यी राशिकी युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष हुन्छन् अत्यन्तै भाग्यमानी ! - Sakaratmak Soch
यी राशिकी युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष हुन्छन् अत्यन्तै भाग्यमानी !
पति र पत्नी एक अर्काको परिपुरक मानिने गर्छन् भने धार्मिक रुपमा पनि पत्नीको पतिको जीवन सुधार गर्न ठुलै भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्ने गरिन्छ। पति र पत्नी बीच हुने सामिप्यताले धेरै कुरामा असर गर्ने गर्छ। हरेक मानिसहरुको फरकफरक बानि मात्र मात्र नभई भाग्य पनि फरक हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार केही यस्ता राशि भएका महिलाहरु हुने गर्छन् जसले आफ्नो पतिको भाग्य चम्काउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छन्।
मेष राशि: मेष राशि हुने महिलाहरु प्राय शान्त स्वभावका रहने गर्छन्। जसको पनि भनाइ धेरै गहन रुपमा सुन्ने बानी रहने भएका कारण यस राशिका महिलेहरु झगडा देखि पनि टाढा रहन्छन्। मेष राशि भएका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई गल्ति देख्ने कुनै पनि मौका दिन नचाहने गर्छन्। आफ्नो पतिको धेरै ख्याल गर्ने हुँदा मेष राशि भएका पत्नी पाउने पुरुषलाई धेरै भाग्यमानी गरिन्छ। यस राशि भएका महिलाहरु आर्थिक रुपमा पनि बुद्धिमानी मानिने गर्छन्।
कन्या राशि: कन्या राशि हुने महिलाहरु आफ्नो हरेक जिम्मेवारी पूरा गर्न रुचाउने गर्छन्। यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिको हरेक कार्यमा साथ दिने गर्छन्। आफ्नो दाम्पत्यजीवनमा धेरै खुशी रहने गर्छन्। आफु पनि छिटै खुशी हुने हुँदा पतिलाई दुखि हुने मौकानै दिदैंनन्। साथै यस राशि भएका महिलाहरुलाई व्यापार धेरै फाप्ने हुँदा पनि आफ्नो पतिको भाग्य चम्काउन धेरै सफल हुने गर्छन्।